एचआइभी संक्रमण घट्दै, रोकथाममा नेपालको आशलाग्दो प्रगति – Health Post Nepal
२०७५ मंसिर १४ गते १९:५९
पतिको देनमा शरीरमा एचआइभी पालिरहेकी मथुराको डेढ दशकको जीवनसंघर्ष
काठमाडौंमा मात्रै थपिए ४ सय ६४ एचआइभी संक्रमित
प्रतिवर्ष १ डिसेम्बरमा मनाइने विश्व एड्स दिवस यसवर्ष नेपालमा ‘एचआइभी जाँच गराऔँ, आफ्नो अवस्था थाहा पाऔँ’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाइने भएको छ । ‘एड्सविरुद्ध विश्व अभियान’ कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै विश्वभरका सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्था, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमलगायत सबै क्षेत्र र वर्ग एकजुट भई मनाइने विश्व एड्स दिवस एचआइभी पत्ता लागेको ७ वर्षपछि सन् १९८८ देखि मनाउन थालिएको हो ।
नेपालमा करिब ७६ प्रतिशत एचआइभी संक्रमण असुरक्षित यौनसम्पर्कका माध्यमबाट भएको पाइन्छ । नेपालको वर्तमान एचआइभीको अवस्थालाई केन्दीकृत महामारीको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसको अर्थ एक वा सोभन्दा बढी एचआइभी सर्न सक्ने जोखिममा रहेको समुहमा एचआईभी संक्रमणदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी तर सामान्य जनसंख्यामा एचआइभी संक्रमणदर १ प्रतिशतभन्दा कम हुनु हो ।
नेपाल सरकारले एचआइभी सम्बन्धमा सन् २०२० सम्मका लागि ९०:९०:९० लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्यअनुसार ९० प्रतिशत एचआइभी संक्रमितले आफ्नो संक्रमण अवस्थाबारे थाहा पाउनेछन् । तीमध्ये ९० प्रतिशतको औषधोपचारमा पहुँच हुनेछ भने औषधि खानेमध्ये ९० प्रतिशतको शरीरमा भाइरसको भार न्यून भएको हुनेछ । स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी ९०:९०:९० लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारको मात्र एकल प्रयास पर्याप्त नहुने बताउँदै सम्पूर्ण गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रलगायत आमजनसमुदायको सहयोगको आवश्यकता औँल्याउँछन् ।
नयाँ संक्रमित घट्दै, नेपालको आशलाग्दो सफलता
पछिल्लो ८ वर्ष (२०१०–०१७)को तथ्यांकलाई केलाउँदा विश्वव्यापी रूपमा एचआइभीको नयाँ संक्रमण १६ प्रतिशतले घटेको छ भने बच्चामा हुने संक्रमणमा ३५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने एड्सका कारण सबैभन्दा बढी मृत्यु भएको वर्ष सन् २००४ देखि २०१७ सम्म आइपुग्दा एड्सको कारणले हुने मृत्यु ५१ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल उक्त ८ वर्षको अवधिमा नयाँ संक्रमणदर उल्लेख्य घटेको पाइएको छ । अनुमानित संक्रमितको संख्यालाई आधार मान्दा नेपालमा ०१० को तुलनामा ०१७ मा नेपालमा ६१ प्रतिशतले नयाँ संक्रमण घटेको देखाएको छ । उक्त तथ्यांकअनुसार नेपाल एचआइभी उपचार तथा रोकथाम अभियानमा विश्वमा राम्रो देश प्रगति गर्ने देशको अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । नेपालमा निःशुल्क उपचारको उपलब्धता र रोकथामका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताका कारण सफलता मिलेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका सूचना अधिकारी वीरबहादुर रावल बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा सरकारी, गैरसरकारी, दातृनिकायका तर्फबाट एचआइभीको क्षेत्रमा बर्सेनि करिब २ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट ७५ करोड खर्च हुने गरेको छ ।
एचआइभी संक्रमण घटाउँदै एड्सको महामारीलाई अन्त गर्ने दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सन् २०३० सम्मको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
संक्रमणको पछिल्लो अवस्था
सन् २०१७ को अन्तसम्म संसारभर ३ करोड ६९ लाख व्यक्तिमा एचआइभी संक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ, जसको ५९ प्रतिशत अर्थात् २ करोड १७ लाखजना मात्र एआरभी उपचारमा छन् । नेपालमा उक्त अवधिसम्म ३१ हजार २० जनामा संक्रमण भएको अनुमान छ भने २१ हजार १ सय ४८ जना संक्रमित हालसम्म सार्वजनिक भएका छन् । तीमध्ये १६ हजार ४ सय ४८ जना उपचारमा छन् । संक्रमितमध्ये पुरुषको संख्या १९ हजार २० छ । १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहको वयष्क जनसंख्यामा एचआइभीको व्याप्ततादर ० दशमलव १५ प्रतिशत छ । नेपालमा करिब ७६ प्रतिशत एचआइभी संक्रमण असुरक्षित यौनसम्पर्कका माध्यमबाट भएको पाइन्छ । नेपालको वर्तमान एचआइभीको अवस्थालाई केन्दीकृत महामारीको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसको अर्थ एक वा सोभन्दा बढी एचआइभी सर्न सक्ने जोखिममा रहेको समूहमा एचआइभी संक्रमणदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी तर सामान्य जनसंख्यामा एचआइभी संक्रमणदर १ प्रतिशतभन्दा कम हुनु हो ।
नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा प्रतिवर्ष थप संक्रमित संख्या
उच्च जोखिम समूह
नेपालमा एचआइभी संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका समुहहरूमा सुईद्वारा लागुपदार्थ प्रयोगकर्ता, पुरुष समलिंगी तथा तेस्रोलिंगी, रोजगारीका लागि विदेसिने समूह र जेलका कैदी हुन् । सुईद्वारा लागुपदार्थ प्रयोग गर्नेहरू र पुरुष समलिंगी यौनकर्मीमा एचआइभी संक्रमणदर अरु जोखिम समूहभन्दा उच्च छ । एचआइभी तथा एड्ससम्बन्धी क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय एचआइभी रणनीतिक योजना २०१६–२०२१ ले निर्देश गरेअनुरूप सञ्चालित छन् ।
एचआइभी संक्रमण घटाउँदै एड्सको महामारीलाई अन्त गर्ने दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सन् २०३० सम्मको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि एचआइभी रोकथाम, हेरचाह, सहयोग तथा उपचारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी यस वर्षको एड्स दिवस मनाउन लागिएको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ ।
के छन् एड्स दिवससम्बन्धी केन्द्रका कार्यक्रम ?
– देशका विभिन्न भागमा एचआइभी शिविर चलाउन २ लाख ८० हजार टेन्स बिटहरू सबै जिल्लामा पठाइएको छ । सबै क्षेत्रमा आइएनजियोहरूलाई परिचालन गर्न पत्राचार गरिएको छ ।
– लक्षित वर्गसम्म चेतना पुर्याउन विभिन्न मिडियालाई आह्वान गरिएको छ ।
– विज्ञहरूमार्फत विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता तथा टक सो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकिएको छ ।
– काठमाडौं उपत्यकामा एचआइभी परीक्षणका लागि पुरानो तथा नयाँ बसपार्क, लगनखेल र भक्तपुरको सूर्यविनायकमा स्टलहरू खडा गरिएका छन् ।
– स्वास्थ्यसेवा विभागको तालिमकेन्द्रको हलमा शनिबार बिहान ९ बजेदेखि रक्तदान कार्यक्रम आयोजना हुँदै छ ।
– स्वास्थ्यमन्त्रीबाट एचआइभी एप्लिकेसनको शुभारम्भ हुँदै छ ।
– चेतनामूलक प्रचार सामग्रीहरू सबै स्थानीय तहसम्म पुर्याइएको छ ।
– एचआइभीका क्षेत्रमा योगदान गर्ने विभिन्न व्यक्तित्व तथा संघसंस्थालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ ।
Tags: इन्जु ढकाल, एचअाइभी, एड्स, विश्व एड्स दिवस